Words With Friends2- Free Word ဂိမ်းများနှင့်ပဟေFreeိများ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » သူငယ်ချင်းများ2နှင့်အတူစကားများ - အခမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂိမ်းများ & ပဟေဠိ
သူငယ်ချင်းများ2နှင့်အတူစကားများ - အခမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂိမ်းများ & ပဟေဠိ APK ကို
ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော်မိုဘိုင်းစကားလုံးဂိမ်းထဲကတစ်ခုကြှနျုပျတို့အားလုံးအတွက်စကားလုံးကစားသမားအဘို့တည်အားလုံးဂိမ်းအသစ်သည် Modes နှင့်အတူအစဉ်အဆက်ထက်ပိုကောင်းနှင့်စမတ်သည်။ လှလှပပနှင့်ထောက်လှမ်းရေးဒီဇိုင်း, သူငယ်ချင်းများ2နှင့်အတူစကားစကားလုံးဂိမ်းများ, စကားလုံးပဟေဠိများနှင့်အစဉ်အဆက်အရင်ကထက်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ပိုအကျင့်တို့နှင့် teeming ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဝေါဟာရ Expand နှင့်သင်ဤချစ်ရာသခင်သည်အခမဲ့စကားလုံးဂိမ်းထဲမှာအမြင့်ဆုံးအမှတ်ပေးစကားလုံးရှာဖွေအဖြစ်သင့်စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြပါ။
သူငယ်ချင်းများ2အတူစကားလုံးများကိုစကားလုံးပဟေဠိဂိမ်းအတွက်အဆုံးစွန်ပါ! ဒါဟာကစားရန်အခမဲ့, ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲပါ!
သင့်ရဲ့စကားလုံးဂိမ်းမြှင့်တင်ရန်လိုပါသလား? နှစ်ကြိမ်တစ်လအသစ်သောစကားလုံးဂိမ်းများ, themes များနှင့်ဆန့်ကျင်အတူ updated တစ်ကိုယ်တော်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ရပ်များအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်ဆန့်ကျင် Play ။ တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင် Streak ရှိသလား? အဆိုပါ Lightning က Round ၌သင်တို့၏လျင်မြန်သောစကားလုံးအဆောက်အဦကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ဖို့အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီအဖွဲ့သည်ဂိမ်းအတွက်ဤနေရာသို့သွားရန်။
တခါတရံမှာထိတွေ့တည်းခိုပြီးပြည့်စုံသောစကားလုံးကစားသကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အခမဲ့စကားလုံးဂိမ်းတွေထဲက Download ယနေ့သူငယ်ချင်းများ2နှင့်အတူစကား play! အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဝင်းမေ။ ™
တစ်ဦးက GAME CREATE
ဂိမ်းထိပ်တိုက်တွေ့ဤနေရာတွင်စတင်သည်ဟူသောစကားလုံး►။ ကစားရန် crossword ပဟေဠိများနှင့်စကားလုံးပဟေဠိဂိမ်းကိုချစ်တော်မူသောသင်တို့ကို Facebook မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များကိုစိန်ခေါ်မယ်, သို့မဟုတ်သင့်စုံလင်သောစကားလုံးပဟေဠိပြိုင်ဘက်ကိုရှာဖွေစမတ်ပွဲစဉ်ကိုသုံးပါ။ ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အမြင့်ဆုံးအမှတ်ပေးစကားလုံးများကိုရှာရန်နှင့် crossword စတိုင်ပဟေဠိအတွက်ဖြည့်ပါ!
►စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တော်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ရပ်များတွင် THEME WordMaster ဇာတ်ကောင်ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့စာလုံးပေါင်း, ဝေါဟာရနှင့်စကားလုံးကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ။ သင်လှေကားတက်ရွှေ့သကဲ့သို့, WordMasters ရိုက်ပုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ချွန်ထက်နေပါ။
Lightning Round ယှဉ်ပြိုင်
►ပူးပေါင်းအသစ်မြန်ဆန်အဖွဲ့ mode မှာယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။5ကစားသမားမှတက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အပေါ် Play နှင့်ပထမဦးဆုံးအများဆုံးရမှတ်ဂိုးသွင်းနှင့်အနိုင်ရမယ့်ပွဲစဉ်များတွင်ချွတ်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ လျင်မြန်စွာဘုတ်အဖွဲ့တွင်ရှာပါ။
ACCESS 50,000 စကားလုံးအသစ်
အဆိုပါအဘိဓါန်မှ►ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံး update ကိုအစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ pop ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့်မှုတ်သွင်း 50,000 အသစ်သောစကားတို့ပါဝင်သည်။
သူငယ်ချင်းများ2နှင့်အတူစကားများအခမဲ့စကားလုံးဂိမ်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်ယခင်ကဆိုမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိသူငယ်ချင်းများစကားလုံးဂိမ်းနှင့်အတူ Pro ကိုသို့မဟုတ်မူရင်းစကားများမ Third-party ကြော်ငြာတွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဖြစ်စေစကားများဝယ်ယူလျှင်သင်ရွေ့လျားအကြားတတိယပါတီကြော်ငြာများမပါဘဲကစားနိုင်ပါတယ်။ Facebook မှာဒါမှမဟုတ်သင်ရွေ့လျားအကြားတတိယပါတီကြော်ငြာများမပါဘဲကစားရန်ဆက်လက်ယခင်ဝယ်ယူစေရန်အသုံးပြုသောအီးမေးလ်အကောင့်နဲ့ log ရန်သေချာစေပါ။
သမ်မာကမျြးပဟေဠိသူတွေဟာ? ယခုပင်လျှင်တစ်ခုအောင်မြင်သော Wordie? ကျွန်တော်တို့ကို Facebook ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စကားလုံးဂိမ်းသတင်းများ, ပြိုင်ပွဲ, ရွေးကောက်ပွဲနှင့်အခြားပျော်စရာအပေါ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေဖို့ Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာလိုပဲ။
မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အများဆုံးပျော်စရာ, လူမှုရေးစကားလုံးပဟေဠိ၏တဦးတည်း Play! ယနေ့သူငယ်ချင်းများ2နှင့်အတူစကား Download!
ဂိမ်းကစားရန်အခမဲ့; သို့သော် In-app ကိုဝယ်ယူမှုနောက်ထပ်အကြောင်းအရာနှင့် In-ဂိမ်းငွေကြေးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ 10th Friendiversary ပဲ! ကျနော်တို့ပုံပြင်များ, ဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူအားလုံးဇူလိုင်လကျင်းပနေပါတယ်။
- Friendiversary: ​​100 /7မတိုင်မီ 28 သန်းဂိမ်းကိုဖန်တီးရန်အသိုင်းအဝိုင်းစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူသေးအကြီးမားဆုံးဖြစ်ရပ်
- Legacy သတ်မှတ်မည်: ကစားနှစ်ပေါင်းအပေါ်အခြေခံပြီး3အခမဲ့ထူးခြားတဲ့ tile ကိုစတိုင်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့ခရီးအခမ်းအနားကျင်းပ
-7/ 19 ပါတီငါတို့အမှန်တကယ်နှစ်ပတ်လည်နေ့အပေါ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါတီ! အထူးလက်ဆောင်များ, ပျော်စရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပိုပြီး
subscription စမ်းကြည့်ပါ: လစဉ်လတိုင်းသင့်ရဲ့ကြော်ငြာ-အခမဲ့ Bundle ကိုသက်တမ်းတိုးရန်! သင်ကဂိမ်း store မှာထုတ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သူငယ်ချင်းများ2နှင့်အတူစကားများ - အခမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂိမ်းများ & ပဟေဠိ
77.99 ကို MB